Diyaar garowda doorashada Mauritania - BBC News Somali
Diyaar garowda doorashada Mauritania
Image caption Dadka reer Mauritania oo u maalin kaddib u dareeraya doorasho
In ka badan 1.4 milyan oo ah muwaadhiniinta waddanka Mauritania ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa maalinta Sabtida ah.
Madaxweynaha hadda xilka haya, Mohamed Ould Abdel Aziz ayaa la tartami doona afar musharax oo ay ka mid tahay haweeney iyo nin u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka adoonsiga.
Sida ay aaminsan yihiin dadka goobjooga u nonqonaya doorashada, Madaxweyne Mohamed Ould Abdel Aziz ayaa si sahlan ku guuleysan doona, maadaama ay axsaabta mucaaradka ugu awooda badan ay doorashada qaadaceen.
Mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada oo la gaarin ay ku shubatay, waxaana ay doonayaan in dib loo dhigo inta hannaan cadaallada ku salaysan la gaarayo.
Wasiirkii hore ee maaliyada, Bodiel Ould Houmeid, ayaa ah ninka ugu cadcad musharaxiinta la tartamaya Madaxweyne Abdel Aziz, waxaana inta badan ay dadku u arkaan nin dib u heshiisiin qaran u taagan.
Mauritania ayaa lagu tilmaamaa dal u kala qeybsan qowmiyadaha madowga ah iyo dadka Moorish-ka ah ee ay gacanta ugu jirto talada dalkaasi.
Xiisaddii ka dhexeysay Senegal iyo Mauritania sanadkii 1989, ayaa keentay in dad badan oo madow ah laga musaafuriyo Mauritania oo loo gudbiyo Senegal , halkaasi oo ay musaafuris ahaan weli ugu nool yihiin.
Dowladda Mauritania ayaa lagu eedeeyay in ay qowmiyadaha madowga ah u diideyso dalkeeda, balse eedeyntaasi waa ay iska diiday oo waxa ay sheegtay in inta badan dadkaasi madow ay ka yimaadeen dalalka Senegal iyo Mali.
Arrin kale oo muhiim u ah doorashada Sabtida ayaa ah adoonsi la sheego in weli uu ka jiro dalkaasi, waxaana hay'ado badan oo aan dawli ahayn ay dowladda ku eedeeyeen in aanay wax badan ka qaban joojinta adoonsiga.
Madaxweyne Abdel Aziz ayaa ololaha ku galay in uu waxbadan ka qabtay ammaanka dalkiisa, uuna ka hortagay weerarro kaga yimaada argagixisada.
Madaxweynaha ayaa afgembi milateri xukunka ku qabsaday sanadkii 2008-da.